I-china i-Lithium Bromide Absorption Technology abakhiqizi nabaphakeli | SHUANGLIANG ECO-AMANDLA
Uhlobo Oluxoshwe Ngqo
Uhlobo Lwamanzi Ashisayo
Ukumunca Impompo Yokushisa
I-Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
Uhlobo olupholile lwamanzi lwe-Centrifugal Chiller / Pump Pump
Deep Hole Butt zokushisela Heat umzimba
Ozigoqile Tube Heat umzimba
Double Tube Ishidi Heat umzimba
Ezokuphepha Heat umzimba
I-TEMA Heat Exchanger
I-Inter Stage Cooler yeCompressor ne-Regeneration Heater
Isistimu yokulawulwa kwensimbi eqondile Intelligent system yokupholisa
I-Direct Air Cooled Condenser System (i-ACC)
Okungaqondile usimende umbhoshongo owomile uhlelo lokupholisa
Ukonga amanzi & uhlelo lokupholisa ukoma okupholile
Ubuchwepheshe beLithium Bromide Absorption
I-Shuangliang inezinto ezingaphezu kuka-30,000 zokonga amandla nezokuvikela imvelo ekusebenzeni okuzinzile emhlabeni jikelele, okusatshalaliswa emikhakheni ehlukahlukene njengezohwebo, izikhungo zomphakathi, imboni, nemikhiqizo ithunyelwa emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni jikelele.
Cishe iminyaka engama-40 yesipiliyoni ku-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini yokonga ugesi
Izinsiza kusebenza ezinkulu zefriji / zokushisa impompo i-R & D nesisekelo sokukhiqiza
Umbambiqhaza ekwakheni i-china lithium bromide ukumuncwa okushisa / okushisa futha okujwayelekile kuzwelonke
Ukuqina komoya okuphezulu kanye ne-COP ehamba phambili embonini
IShuangliang inokuningi kwe- 30,000 okonga ugesi kanye nemishini yokuvikela imvelo ekusebenzeni okuzinzile emhlabeni jikelele, kusatshalaliswa emikhakheni eyahlukahlukene enjengezentengiselwano, izakhiwo zomphakathi, imboni, nemikhiqizo ithunyelwa ngaphezulu 100 amazwe nezifunda emhlabeni jikelele.
Ubuchwepheshe obuholayo busetshenzisiwe ukuqinisekisa ukuthi
ukusebenza ephakeme chiller
1. Amaphampu Amabili futhi ngaphandle kwe-Spray Nozzles
Ukuhlelwa Kwesobunxele-Phakathi Nesokudla: i-absorber-evaporator-absorber;
Omunca amapuleti aconsayo esikhundleni semibhobho yesifutho;
Gwema ukwehla kwamandla okupholisa;
Yandisa impilo yokusebenza ye-chiller.
2. Ukusatshalaliswa kwesiqandisi ngokuvula amapuleti ku-Evaporator
Ukusetshenziswa ngokuyikho kwendawo yokudlulisa ukushisa;
Nciphisa uketshezi kwefilimu oketshezi;
Thuthukisa ukusebenza kahle;
Nciphisa ukusetshenziswa kwamandla kwepompo yesiqandisi.
3. Amapayipi wekhwalithi ephezulu nokuhlelwa kokugeleza okuhlelwe ku-Evaporator
Qinisekisa ngisho nokusatshalaliswa komphumela wokudlulisa ukushisa;
Thuthukisa ukusebenza kahle kokudlulisa ukushisa.
4. Ubuchwepheshe Bokudlulisa Ukushisa
Ukuqinisekisa ukusebenza okuphephile nokwelula umjikelezo wempilo;
Ukusebenza kahle kokudlulisa ukushisa okungu-93.5%.
5. Ubuchwepheshe Bokuqandisa
Amashubhu e-evaporator avikelekile ekuqandeni. Kubonakala ngokuqoqa amanzi esiqandisini ekondensa egumbini elingezansi le-evaporator, bese eqhutshelwa emapuletini aconsayo. Ngakho-ke inqubo yokuvuza kwefriji ibizomiswa ngokushesha uma iphampu yesiqandisisi icinyiwe.
6. Ukugeleza Kwesixazululo Sesisombululo
Mahhala kusuka crystallization futhi ukunciphisa ukugqwala;
Thuthukisa ukuthembeka futhi uqaphele ukulawula okuqondile kwe-chiller.
7. Isistimu Yokuhlanza Igesi Engaguquki
Izikhala zomoya zedivayisi yokuhlanza zihlelwe ngaphakathi kweyunithi ukuqinisekisa ukusebenza kahle kokuncoma komoya.
8. Uhlelo Lokukhishwa Kwegesi Olungashintshi Olungaguquki
Lawula ukuqala nokuvala i-valve ye-solenoid eyenziwe yizingcindezi eziphakeme nezilungiselelo zokucindezela okuphansi kwe-cylinder yokuhlanza ngokuzenzakalela, ngakho-ke ukuqala / ukumiswa kwepompo yokuphuma kanye nokukhishwa kwegesi kuyabonakala.
9. SL Ekude
Uhlelo lokuqapha olukude lwe-SL lwakhiwe ngokususelwa kumaseva angaphakathi eShuangliang, futhi abasebenzisi bangavakashela kalula ngewebhusayithi nge-akhawunti ebhalisiwe nephasiwedi efanele ukubheka imininingwane ye-chiller.
Imisebenzi: ukuqoqwa kwemininingwane, ukuqapha online, ukugcinwa kwedatha nokuphathwa, ukuhlaziywa kwedatha nokuxilongwa kochwepheshe, iphutha lokuxwayisa kusenesikhathi kanye nesaziso se-alamu.
Bonke lobu buchwepheshe obunelungelo lobunikazi noluthuthukile benza ukusebenza kusheshe kakhudlwana, kuthembeke futhi kube lula.
Langaphambilini ukonga amanzi & uhlelo lokuncishiswa kokupholisa okwomile
Olandelayo: I-Electric Chiller ne-Heat Pump Technology
I-Lithium Bromide Absorption Chiller
I-Lithium Bromide Absorption Heat Pump
Ubuchwepheshe Bokusindisa Amanzi Emoyeni
I-Electric Chiller ne-Heat Pump Technology
Isistimu yokudlulisa ukushisa okuphezulu